mukomana musikana church kupfimbana bhaibheri pentecostal
Chikwata cheku dzingwa mu Zanu
Olivia akaonekwa asiri Muchena, aive neNhema
saFrancis, uya wekurohwa neShamu saWebster
nokuti Simba-reuta muparamende range
raMudarika pamusana pekusateerera paakanzi
Dzikamai Mavhaire. Dydmus akachema oti "nhandi
Mutasa, Joyce zvawatidyisa neMujuru, ini ndange
ndaronga naNicolas kuti tiva Goche" Ndiyo nyaya
yekuparara kwevakuru iyi.
parliament zanu pf - 2014 factions Joyce Mujuru big brother zanu pf Nicholas Goche Webster Shamu Olivia Muchena Dzikamai Mavhaire Francis Nhema
wasu doro bocha buhera
Kufadza munhu kwakaoma - bofu
Kufadza munhu kwakaoma vakomana!
Rimwe bofu raigaronyunyuta kuti munondiisira nyama shoma. One day rakaisirwa huku yese muplate. Bofu riya ndokuti "ukaona isu toisirwa huku yese kureva kuti imi matopakurirana mbudzi yake yake"
bofu kukara nyama kunyunyuta
Murombo haarovi Chinenguwo
Ndakasvika pakaungana vanhu ndikati paneiko, wanike ndiChinenguwo naMurombo vari kurwa. Ahhh, Murombo akakanda chematsenganzungu, Chinenguwo ndobva anzvenga, Chinenguwo achibanha Murombo nembhutsu, Murombo achiwira kwakadaro uko.
Chinenguwo ndokuzogara pamusoro paMurombo ndokutanga kumutsonda nezvibhakera kusvika asarenda.
Chokwadi musi uyu ndakaona kuti Murombo haambofa akarova Chinenguwo
tsumo murombo kurwa
Yambiro kuva paridzi - mboko
ATT: To all preachers
Pullpit language adjustment to all the devil cursers. Zviya zvekutukirira Satan muchiti "satan imphoko!!!" To be stopped with immediate effect. Mphoko is the new Zanu PF and Zimbabwe 2nd Vice President. Kana zvanetsa mungatoti "satan mujuru!!!!"
zanu church pentecostal zanu pf - 2014 factions Joyce Mujuru Mphoko Mboko Vice President
chikwata chiri kutsvaka basa
Ukanzwa anoda vakomana 2 vemombe ndinavo Goche na Mutasa and vanoda DJ ndina Shamhu. Vanoda barman ndina Mavhaire, musikana wemumba ndina Mujuru, wemwana ndina Muchena. Pliz vanhu ava vanoda basa iri nezuro chaiye ok
zanu basa musikana webasa zanu pf - 2014 factions Joyce Mujuru big brother zanu pf Nicholas Goche Webster Shamu Olivia Muchena mukomana wemombe
Harare to mutare vs xmas to new year
Passenger : " nhai va driver hw far is it from Harare to Mutare?"
Driver : "Haaa, it is 290km"
Passenger :" Ko from Mutare to Harare?"
Driver : "Unopenga here? Handiti zvakangofanana here?"
Passenger : "Uummm kungobvunzawo kuti ndizive sezvo kubva pa new year kusvika pa christmas pane gore, asi kubva pa christmas kuenda pa new year ringori vhiki chete"
mutyairi harare kisimusi christmas mutare
Mbuya vako munigga vanodropa zambia vomonerera dhuku mumaoko
Baba vakadzingwa basa nenyaya yekutambisa gedhi palunch
Haisi mhosva yako,imhosva yema dzitateguru ako aienda kuhondo asina zvombo achitemba kupopota
Ndosaka baba vako vakarohwa naamai nenyaya yekuchemera kurara muprema
Matama semimba yegonzo!
Wakapusa kunge mukadzi wen'anga anodaidza murume wake kuti sekuru
Uri benzi wakarega chikoro munhu wawaikopa afa
Kumashure kune chirimi kana wakubudisa mweya kunoti thuuuu.
Kumba kunotyiwa aids kwamunobika makapfekedza mugoti condom
Kungwarisa kunge wakakura uchichera nyoka
Mumba menyu mugomba vanhu vakati gogoi unoti wirai
Kusviba zvekuti ukapinda musango tsubvu dzose dzinodonha dzichiti IGWEEE
Ndosaka wakaenda kuhondo nepinjisi uchiti urikuda kunosunungura Zimbabwe.
Kumusha kure kunosvika mapostori akunzi mawhite ninjaa
Kusviba kunge blackmarket
Dhirezi rako rakahwinwa nababa vako vakunda munhu wese kuridza chiwepu padhibhi.
Kuomera ungati chibereko chehure.
Kufumuka kunge mukadzi wechigure anonongedzera murume wake achiti ichoo.
Wakajaidzwa nambuya vako vaikurova neZambia.
zvituko aids mimba zimbabwe mbuya
dofo chicken mukomana musikana
afcon (gabon 2017)